Kulan Muqdisho ka dhacey oo looga hadley Maalgashiga Soomaaliya – idalenews.com
shirweyne looga hadlayo maalgashiga Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo shirkan ay ka soo qeyb galeen Mas’uuliyiin ka socotay Rugta Ganacsiga Soomaaliya iyo kan Kenya.
Shirkan oo uu soo qaban qaabiyay SORIC oo shirweynaha maalgashiga Soomaaliya looga hadlayo ku qabanayo 28-29 bishan May ayaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga dalka, isla markaana loo abuuri lahaa fursado maalgashi looga sameysto Soomaaliya.
Xasan Nuur oo ah Madaxa SORIC ee shirkan soo qaban qaabiyay ayaa sheegay in fikirkan iyo talada Ganacsatada Soomaaliyed uu yahay sidii barnaamijkan loo sameyn lahaa, isla markaana isugu imaan lahaayeen rugta ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
Mr Xasan Nuur ayaa ugu baaqay Soomaalida inay ka faa’ideystaan dalkooda oo ah dal qani ah, isla markaana ay maalgashi ka sameystaan.
Waxaa uu sheegay in shirkan aanu aheyn mid siyaasadeed, isla markaana uu yahay shir Soomaali leedahay, waxaana uu xusay in shirkan lagu qabanayo Nairobi midka xiga lagu qabanayo gudaha dalka Soomaaliya.
Mr James oo ah Gudoomiyaha rugta Ganacsiga Kenya ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal la maalgashan karo, isagoo soo jeediyay in la isu furo ganacsiga dalalka deriska, isla markaana Ganacsatada loo ogolaado in iyagoo aan xayiraad la kulmin ay maalgashi ka sameystaan dalalka deriska.
Sidoo kale Mas’uuliyiin ka socotay Rugta Ganacsiga Soomaaliyed oo shirka ka hadlay ayaa dhankooda tilmaamay inay muhiim tahay in dalka maalgashi lagu sameeyay, waxaana ay soo dhoweeyeen inay ka qeyb galaan shirka maalgashiga Soomaaliya looga hadlayo ee dhamaadka bishan ka furmaya magaalada Nairobi.
Madadax Hey’adda Cilmi baarista iyo wada tashiga ee CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle oo kulanka ka qeyb galay ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in dalkan la maal gashado, isagoo tilmaamay inay jiraan shirkado waa weyn oo caalamka ku yaala inay dalka maalgashadaan, hase ahaatee ay la’yihiin meel ay wax ka bilaabaan.
Waxaa uu sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo hey’adihii ku shaqada lahaa, isla markaana Baarlamaanka uu soo saaro sharciga maalgashiga, si ay dalka u yimaadaan shirkado dalka maalgashada, una faa’ideeya shacabka Soomaaliyed.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliyed Jen. C/xakiin Dahir Saacid oo kulanka gaba gabadiisa ka hadlay ayaa balan qaaday inay ammaanka sugi doonaan, isla markaana maalgelinta lagu sameynayo dalka ay qeyb weyn ka qaadanayo inay abuurto jawi dadka uga faa”ideystaan inay helaan shaqooyin.
“Shirkan waa shir muhiim ah, waxayna wax ka tari kartaa dhiira gelin u tahay amniga, maalgelinta dalka lagu sameynayo wax weyn ayay xaga nolosha bulshada ka bedeli kartaa, waxaa balan qaadeynaa inaan ammaanka culeys saarno”ayuu yiri Taliyaha Booliska Soomaaliyed.
Ugu dambeyn SORIC ayaa ku casuunaty dhamaan Ganacsatada Soomaaliyed inay ka soo qeyb galaan shirka Maalgashiga ee ka furmaya magaalada Nairobi, kaasoo ay markii u horeysay heshiis ku kala saxiixan doonaan Rugta Ganacsiga Soomaaliyed iyo Rugta Ganacsiga Kenya, iyadoo shirkaas ka qeyb galayaan Ganacsato maalgashdayaal ka socda caalamka iyo shirkado ganacsi.